IFIKA NINI ISOUTH PARK EHULU? - HULU
Ifika nini iSouth Park eHulu?
Uthotho lweehlaya zoopopayi iSouth Park eyaqala ukusasaza eHulu ngo-2014, ayisafumaneki eHulu.
Uthotho lweehlaya zoopopayi iSouth Park eyaqala ukusasaza eHulu ngo-2014, ayisafumaneki eHulu. Uthotho lwee-animated ezisebenza ixesha elide lwenze abaphulaphuli babo bahleka ngaphezulu kweminyaka engama-20. Umboniso ubusemoyeni iminyaka engama-23, kwaye ngo-2012 wasasazwa kwindawo yokuwa. Ukusuka kwisizini yokuqala, i-2020 yayikukuphela konyaka ngaphandle kokubhengezwa kwexesha elitsha. Abantu abaninzi badanile njengoko yasuswa ngesiquphe eHulu.
Ngaba abadali baya kudlala kwisizini elandelayo yolu thotho? Ukuba kunjalo, umntu angayibukela phi? Ukuba ufuna ukubukela umboniso ngoku, ungawubukela phi namhlanje? Kule nqaku, unokufumana.
Kubuya nini iSouth Park eHulu?
Ukuba ulinde iSouth Park ukuba iqale ukusasaza kwiHulu, kuya kufuneka uyazi ukuba ikhontrakthi esayinwe ngabenzi bemiboniso iphelile, kwaye khange bayivuselele ikhontrakthi. UMat Stone kunye noTrey Parker bebekhupha amaxesha amatsha omboniso minyaka le kude kube ngu-2020, xa umboniso uyekile ukusasaza. Ke iSouth Park yayisele i-Hulu ngokusemthethweni ngoJuni 23, 2020.
South Park: Ubuninzi besi sifo
Ngo-2020 abadali, endaweni yokukhupha ixesha elitsha, baveze isiqendu esikhethekileyo seyure esibizwa ngokuba sisifo esikhethekileyo esisekwe kwiingxaki kunye nemibuzo abajamelana nayo abantu ngexesha lobhubhane. Nangona kunjalo, ubhubhane okhethekileyo awuyonxalenye yesizini yama-24 kodwa sisiqendu esongezelelekileyo. Abenzi bemiboniso bachaze ukuba okhethekileyo ayilulo endaweni yexesha lama-24 kodwa yongezwa ngaphambi kokudlala kwisizini ezayo.
Kuphi ukubukela iSouth Park namhlanje?
Zintathu iindlela onokukhetha kuzo kubabukeli abafuna ukonwabela uthotho lwehlaya lomntu omdala. Umboniso unqunyanyisiwe kwiHulu, kodwa onke amaxesha onyaka ngoku anokujongwa kwiHBO Max ngaphandle kweziqendu ezintlanu ezirhoxisiweyo kuba yayinempikiswano. Ngoku elo xesha lama-24 lisasaza libukele kula maqonga alandelayo.
Zonke iziqendu ngaphandle kwesihlanu seziqendu ezidlulileyo ezikhoyo kwiHulu ngoku zisasazwa kwiHBO Max. Ikwabandakanya ixesha elitsha lama-24. Nangona kunjalo, iziqendu ezazisuswe kwathiwa zinempikiswano kwaye zazingasasazwa nguHulu ngokunjalo.
Abenzi bemiboniso baqala ukuyifaka kwiComedy Central. Ama-premieres amaxesha afumanekayo ukuba ubukele ukuba unonxibelelwano ngentambo neli jelo.
Indawo yeSouth Park
Ukuba awunakho ukufikelela kwezi ndlela zimbini zingasentla, ungabukela iziqendu ngokuthe ngqo kwiwebhusayithi esemthethweni yeSouth Park. Ukongeza, kukho iziqendu zasimahla kunye neyokuqala yexesha eliphambili lexesha elitsha, onokuzibukela. Olu lolona khetho lulungileyo kubantu abangabhalisanga kwi-HBO Max okanye abangenazo iindlela zokufikelela kwikhebula.
Ukuba ufuna ukuhleka okumnandi, ngaphandle kwamathandabuzo, unokuthembela kwiSouth Park. Ubundlobongela obukhethekileyo bumi njengesiqendu esikwezona zinga liphezulu kule minyaka isixhenxe idlulileyo. Uyakwazi ukuxelela ukuba abaphulaphuli baphose kangakanani kuthotho.
Ama-animes afana ne-hero academia yam
ikliphu yomntu osapho ehlekisayo
Ixesha lesibini lomdlalo akukho bomi
likhona ixesha lesithathu lokufunyanwa kwamagqwirha
Inamba yenkosana yedrako 5 umhla wokukhutshwa
Eyona midlalo ilungileyo ye-360